Jeermiska iyo Antibiyootika - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruur u dhimatey jeermiska ESBL
Resistenta bakterier drabbar nyfödda
Jeermiska iyo Antibiyootika
Publicerat måndag 31 maj 2010 kl 15.02
Jeermiska awoodda u leh iska caabinta daawada disha bakteeriyada ee magaciisa loo soo gaabiyo ESBL (antibiyootika), ayaa ka dilaacay goobaha ummulisada ee dalkaan Iswiidhan. Sadaxdii sano ee ugu danbeeysayna waxaa qaaday boqolaal cunug oo dhalatey iyo kuwo da'yer. Waxaan ku dhintey shan ilaa iyo toban caruura oo aanay waxba ka caabin kara jeermiska awoodda u leh iska caabinta dawada jeermiska ee afka laatiinkana lagu yiraahdo Antibiotika.
2007 waxaa isku gudbiyey jeermiskan loo yaqaan ESBL 80 caruura oo kan ugu yari 5jir ahaa. Sanadkii ina soo dhafayn waxaa isku dusiyey caruur gaareeysa tiradoodu 260,sanadkaan wali laguma sameeynin tiro koob, waxaas durbab la arkaa ineey tiradu siibadaneeys dhanka ka lana uu jeermisku yahay mid caalamiya.
Jeermiska,ESBL waxuu galaa micindhirada mana ahan mid halisa marka uu qofku caafimaad qabo, balse waxuu dhibaatadu bilaaba taa markii uu ruuxu jirado oo ay adag tahay in uu helo kaalmo. Taas waxaa yiri Lars Blad oo ah dhaqtar ka shaqeeya jiroojinka laysku gudbiyo ee Västenorrland.